Ramaax oo ka biyo diiday jaangoynta qiimaha laydhka Berbera | Berberanews.com
Home WARARKA Ramaax oo ka biyo diiday jaangoynta qiimaha laydhka Berbera
Ramaax oo ka biyo diiday jaangoynta qiimaha laydhka Berbera
Hargeysa-(Berberanews)-Xoghayaha Arrimaha Gudaha ee Xisbiga UCID Maxamuud Cali Saleenaan Ramaax, ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay qiime Wasaaradda Macdanta iyo Tamartu ku jaangoysay laydhka Berbera.
Ramaax oo ka jawaab celiyay qoraal ka soo baxay Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta soo saartay qiime ay ku jaangoysay laydhka magaalada Berbera, ayaa ka biyo diiday tallaabaas Wasaaradda.
Dawladda Imaaraadka ayaa magaalada Berbera ka hirgelisay Mashruuca Dab dhaliyaha Tamarta Cadceeda oo ay ku caawisay Berbera, kuna baxday lacag dhan 7.5 milyan dollar.
Mr Ramaax oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi, “Annagoo xisbi mucaarid ah baanu ka qaybgalay markii ka furayay Solarka, oo runtii ah wax weyn oo u soo kordhay Berbera ahaa. Solarka xukuummaddiininaga caawisay iyo sanduuqii laynagaga caawiyayvee Imaaraadkaba aad baan ugu mahadnaqayaa, waana waxtar weyn o u soo kordhay dalka, gaar ahaan Gobolka.”
Markii la furayay ballanqaad bay xukuumaddu samaysay, gaar ahaan wasaaradda Tamarta, iyadoo imika ay shirkad gaar loo leeyahay gacanta ku hayso laydhka, hadana wasaaradda ayaa masuulliyaddii qaadday inay goaan ka soo gaadhaan dhimista qiimaha laydhka.”
Wasaaraddu waxay runtii ku guuldarraysatay qoraalka ay soo qortay inay tidhaahdo 0.09 ayaanu ka dhinay qiimihii hore ee laydhka lagu bixin jiray, maadaama ay taallo 7 Mega watt oo qiimahoodu ku kacay 7 milyan oo dollar, waxaannu leenahay wuu ku badanyahay qinahasi wasaaraddu soo goysay bulshada.” ayuu yidhi Mr Ramaax.
Previous articleSomaliland maxay ka tidhi Markab Xoolo ah oo Sucuudigu soo celiyay?
Next articleGuddoomiyaha UCID oo ergo u diray Madaxweyne Biixi